प्रियंका चोपडा घाइते ! कसरी भयो दुर्घटना ? « Gaunbeshi
प्रियंका चोपडा घाइते ! कसरी भयो दुर्घटना ?
प्रकाशित मिति : 28 August, 2021
एजेन्सी । ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडा यतिबेला आफ्नो आगामी हलिउड सिरिज गढीको छायाँकनमा व्यस्त छिन्। उनले धेरै पटक सेट बाट आफ्ना तस्वीरहरु सेयर गरेकी छन् । हालै, प्रियंका सेट मा एक दृश्य को छायांकनको दौरान चो ट लाग्यो । उनले घा उ देखाइरहेको इन्स्टाग्राम स्टोरीमा आफ्नो फोटो सेयर गरेकी छन् ।
प्रियंकाले दुई तस्बिर सेयर गरेर फ्यानहरुलाई आफ्नो वास्तविक र नक्कली घा उ देखाएकी छन् । उनको पहिलो तस्वीरमा प्रियंका चोपडाको निधारमा र ग त लागेको देख्न सकिन्छ । अर्कोतिर, दोस्रो तस्वीरमा, प्रियंकाले क्यामेरालाई अलि नजिकै लगिन्, आँखी भौं र गालाको बीचमा घा उ देखाउँदै र यो वास्तविक भएको बताइन् । खैर, यो साँच्चै गाह्रो छ दुबै तस्वीरहरु मा वास्तविक र नक्कली चो टहरु बीचको फरक बताउन ।
प्रियंकालाई यो चो ट गढीमा एउटा गहन दृश्यको छायांकनको क्रममा भयो । यो दृश्य एक ल डा ई दृश्य थियो जसमा रिचर्ड मैडेन र पेड्रो पनि उनी संग देखिएका थिए ।
प्रियंका चोपडाले गढीमा जा सू सको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । अभिनेत्री पछिल्लो केहि महिना देखि लन्डन मा यस श्रृंखला को लागी छायाँकन गरीरहेकी छन् । यसअघि उनले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म टेक्स्ट फर यु को काम सकिसकेकी छन् । उनको यो श्रृंखला अमेजन प्राइम मा रिलीज हुनेछ, जो अभिनेत्री को वेब श्रृंखला डेब्यू हो ।
गढी बाहेक, प्रियंका धेरै अन्य बलिउड र हलिउड परियोजनाहरु छन् । उनी प्रसिद्ध हलिउड स्टार केनु रिभ्स को साथ मैट्रिक्स ४ मा काम गरीरहेकी छिन्, मिन्डी को साथमा एक रोमान्टिक कमेडी, विवाहको विषय रियालिटी शो, आमा आनन्द शीलाको बायोपिक । यस संगै, फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित हिन्दी फिल्म ज़ी ले जरा को घोषणा पनि गरिएको छ जसमा प्रियंका, आलिया भट्ट र कट्रिना कैफ एक साथ स्क्रिन साझा गर्न जाँदैछन् ।